Budata Steve - The Jumping Dinosaur APK maka Android
Budata Steve - The Jumping Dinosaur
Free Budata maka Android (2.00 MB)
Budata Steve - The Jumping Dinosaur,
Steve - The Jumping Dinosaur bụ egwuregwu dinosaur nke nwere ike inyere gị aka itinye oge efu gị nụzọ na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ị ga-eme mgbe enweghị ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Steve - The Jumping Dinosaur, egwuregwu na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, na-eweta egwuregwu egwuregwu dinosaur ochie na ekwentị mkpanaaka anyị, nke anyị nwere ike igwu mgbe anyị enweghị ike ijikọ na ya. saịtị na ihe nchọgharị ịntanetị Google Chrome anyị. Na Steve - The Jumping Dinosaur, anyị na-agbalị ịgbanahụ ihe mgbochi ahụ site nịchịkwa dinosaur aha ya bụ Steve. Steve na-agba ọsọ mgbe niile nime egwuregwu ahụ, na mgbe ọ na-aga, ọ na-ezute cacti. Ebe ọ bụ na egwuregwu ahụ kwụsịrị mgbe anyị kụrụ cacti ndị a, anyị ga-emetụ ihuenyo ahụ noge iji mee ka Steve wụpụ ma gafere cacti. Ka cacti na-agbapụ na egwuregwu ahụ, ka anyị na-enweta akara dị elu.
Steve - Dinosaur na-amali elu nwere ike ịrụ ọrụ dị ka wijetị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ibudata ngwa na-egwu egwuregwu na ya window, ma ọ bụ i nwere ike na-egwu ya dị ka a obere window na-emepe na home ihuenyo nke gị android ngwaọrụ. Na-echetara anyị egwuregwu sitere na oge Nokia 3310, Steve - The Jumping Dinosaur dị mfe igwu egwu ma na-agba ọsọ nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla enwere ike itinye na ya.
Steve - The Jumping Dinosaur Ụdịdị
Mmepụta: Ivan De Cabo